Tsenan'ny fizahan-tany sy fizahantany fizahan-tany ho an'ny Golfa hiakatra amin'ny 2028
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Tsenan'ny fizahan-tany sy fizahantany fizahan-tany ho an'ny Golfa hiakatra amin'ny 2028
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Koety • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Vaovao farany momba ny Qatar • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Arabia Saodita • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao farany UAE • Vaovao isan-karazany
Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any amin'ireo firenena GCC dia nanatri-maso fitomboana goavambe tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Ny tatitra vaovao dia manadihady ny tsena fizahan-tany ivelany sy ny fizahantany any Saudi Arabia, UAE, Qatar ary Koety,
Ny tsenan'i Saudi Arabia dia tombanana hahazoana vola 27,030.19 tapitrisa amin'ny 2028.
Ny tsena UAE dia vinavinaina hahatratra $ 30,484.37 2028 tapitrisa amin'ny XNUMX.
Araka ny antontan'isa momba ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, tamin'ny taona 2017, ny fandaniam-bolan'ny fizahan-tany iraisam-pirenena isaky ny capita avy amin'ny firenena Gulf Cooperation Council (GCC) dia 6.5 ​​heny noho ny salanisa manerantany.
Etsy ankilany, araka ny statistikan'ny Banky Iraisam-pirenena, ny fandaniana amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena Arabia Saodita, Qatar, ary Koety, tamin'ny taona 2019 dia voarakitra ho USD 16.415 miliara, USD 12.528 miliara, ary 17.131 miliara dolara. Ankoatr'izay, ity fandaniana tany amin'ny Emira Arabo Mitambatra (Emira Arabo Mitambatra) dia nitombo hatramin'ny USD 18.004 miliara tamin'ny taona 2018 ka hatramin'ny 33.372 miliara dolara 2019.
Ny tatitra vaovao dia manolotra sinopsis amin'ny antsipiriany momba ny tsena fizahan-tany sy fizahantany any Arabia Saodita, UAE, Qatar, ary Koety. Ny tatitra dia mifantoka amin'ny fironana farany eo amin'ny tsena, ny vintana, ny mpamily fitomboana ary ny fangejana mifandraika amin'ny fitomboan'ny tsena mandritra ny taona 2019-2028.
Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any amin'ireo firenena GCC dia nanatri-maso fitomboana goavambe tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ity fitomboana ity dia azo lazaina voalohany amin'ny fidiram-bolan'ny olona any amin'ireto firenena ireto, miaraka amin'ny filan'ny isan'ny olona manao dia lavitra mifandraika amin'ny orinasa, fialamboly, na tanjona ara-pinoana any amin'ny firenena samihafa manerantany.
Amin'ny statistika hafa an'ny Banky iraisam-pirenena, ny vola miditra nasionaly (GNI) isan-kapita any Arabia Saodita, Emirà Arabo Mitambatra, ary Qatar dia nitombo avy tamin'ny USD 19,990, USD 39,290, ary USD 56,920 tamin'ny taona 2017 ka hatramin'ny USD 22,840, 43,470 USD, ary 61,180 USD isaky ny taona. 2019. Ankoatr'izay, tany Koety, io dia nitombo hatramin'ny USD 31,400 tamin'ny 2017 ka lasa 36,290 USD tamin'ny taona 2019.
Ny tsenan'ny GCC fitsangatsanganana ivelany sy ny fizahan-tany dia tombanana hitombo miaraka amina CAGR manan-danja mandritra ny vanim-potoana mialoha, izany hoe, 2021 - 2028. Ny tsena any Arabia Saodita dia tombanana hahazoam-bola USD 27,030.19 tapitrisa amin'ny 2028, hatramin'ny $ 15,100.83 tapitrisa amin'ny ny taona 2019 amin'ny fitomboana amin'ny CAGR 18.21% mandritra ny vanim-potoana vinavina. Ankoatr'izay, ny tsena ao UAE, izay nahazo sanda USD 19,448.49 tapitrisa tamin'ny taona 2019, dia andrasana ihany koa hahatratra USD 30,484.37 tapitrisa amin'ny 2028, amin'ny fitomboan'ny CAGR 18.73% mandritra ny vanim-potoana mialoha. Ankoatr'izay, ny tsena fitsangatsanganana ivelany sy fizahan-tany any Qatar dia vinavinaina hitombo amin'ny CAGR 18.66% mandritra ny vanim-potoana mialoha ary hahazo vola hatrany amin'ny $ 3989.34 tapitrisa amin'ny 2021. Ny tsena any Koety kosa, vinavinaina hahazoana fidiram-bola be an'ny USD 17,392.50 tapitrisa tamin'ny 2028, tamin'ny fitomboana tao amin'ny CAGR 18.40% nandritra ny vanim-potoana vinavina.